Isilumkiso see-imeyile ezingezizo ngegama leGeofumadas -Geofumadas
Isilumkiso se-imeyile yamanga egameni likaGeofumed
NgoSeptemba, 2011 egeomates My
Njengamhla, i-23 kaSeptemba sithole ingxelo evela kubafundi abathi nge-Facebook okanye ngeposi ngokuthe ngqo baye bafumana imiyalezo egameni lomntu obhala kwisayithi ye-Geofumadas.
Ngoko ndiyisebenzise ithuba lokulumkisa isilumkiso.
Lo ngumyalezo weklasi we-African scam othumela umyalezo olandelayo:
Igama lam nguNancy.
Ndikulungele ukudibana nabantu behlabathi lonke ukutshintshana imibono nokufunda ngakumbi malunga nenkcubeko kunye nezinye iindlela zokuphila.
Ndibhala ebusweni geofumadas.com kwaye unqume ukushiya lo myalezo ukwazi ukuba singaba ngabahlobo kwaye mhlawumbi kamva.
Nceda uxolele iimpazamo kuba andazi kakhulu ngeziko kwaye ndisebenzisa umhumushi kuba ulwimi lwangempela lisiNgesi.
Ndiya kuvuya xa ubhala kwakhona ukuze sikwazi ukuzana kakuhle.
Ulindele ukuva kuwe.
Ngokuqhelekileyo kunemihluko embalwa kwaye i-imeyile isetyenziswa
Umyalezo uhamba nefoto yentombazana. Kule nto besele sazi ukuba bayichaza njani abafana besuka ku-www.soloparamusicos.com.ar, uchaza ukuziphendukela kwemvelo ezithatha i-imeyile yesibili, ekugqibeleni iphelile ukucela idatha yokutshintshwa kwebhanki, apho andicinga ukuba akukho mntu sele sele ewa kodwa ukuba iyakucasula ngaphakathi kogaxekile.
Kwaye ezinye iindawo ziye zakholelwa kwaye zakhuthazwa ngaphakathi kwimixholo yazo.
Kuyahlekisa, ukuba umyalezo yinguqulelo embi kakhulu kwiSpanish, apho akhankanya khona ukuba ubhala kule ndawo, kwaye uyaxolisa ngokungazi kangako ngayo. Ezi zinto zincinci zenza ukuba nawuphina umfundi aqonde ukuba ngogaxekile olula, ngelishwa kunzima ukulawula ezi meko, kuba yonke imihla i-spammers zifumana iindlela zokuchwechwa phakathi kwenethiwekhi yoluntu, uluhlu lokubhaliselwa okanye ukugcwala kwesiza. Ke, kulihlazo ukuba kufuneka uphila usazi ukuba bakhona.
Okokuqala, mbulela ububele babafundi abandithumelele i-imeyile endiye ndakwazi ukuhlala ndiphaphile kuyo kwasekuseni, ndikhangela ubungozi kwiWordPress, itemplate entsha, uluhlu lokubhaliselwa lweGeofumadas okanye akhawunti yemidiya yoluntu. Bekunomdla, iphupha lindishiyile okwethutyana, ndifunda okwenzekileyo kwabanye kwaye ekugqibeleni ndawufumana umyalezo ovela kumlawuli wokubamba oqinisekisa ukuba yonke into ibimile kakuhle, kwaye ngumntu ogaxekile nje oqhelekileyo ongena ngaphakathi Ngubani owaziyo ukuba uhlaziyo olutsha lweWordPress lujonga njani ukuba semngciphekweni kwii-backups ezigciniweyo.
Emva kokucacisa umba, ndiphumle ithutyana, ngaphandle kokuzishiya ndingonwabanga. Sikwathabathe amanyathelo okuthintela nakuphi na ukuba semngciphekweni kunye nokugcina uncamathiselo lwethu umgaqo-nkqubo.
Musa ukuphendula i-imeyile
Yona yinto ebulumko kunazo zonke, kwaye indlela engcono yokungaqhubekiyo.
Ukuba unayo i-Gmail, umyalezo ofanayo uza kunye nenhloko ebomvu ethi i-imeyile ingathunyelwa ngumntu ongenayo i-akhawunti, kwaye amaxesha amaninzi asiyiboni ngenxa yokuba iya ngqo kwi-spam.
Okokugqibela, bhenela ekukhuleni kwabafundi, abakwaziyo ukuqonda ukuba la maxesha anje. Ukuba uyazi ngendaleko entsha kolu hlobo lweendlela, singavuyela ukuzixela.
Ukubulisa, kunye nokubonga ngokufunda.
umhleli (kwi) geofumadas.com
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-PlexEarth, Yintoni eyenza i-2.5 inguqu kwimifanekiso yeGoogle Earth
Post Next I-III yeNkomfa yaseLatin American gvSIG, Ukwabelana ngeprojekthi efanayoOkulandelayo »
2 Ukuphendula "Isilumkiso see-imeyile ezingezizo egameni leGeofumadas"
Ndaya kwinto efanayo ekuqaleni ndazikholelwa kodwa ndaqalisa ukuphanda kwaye ndiyabona kwakhona ndiza kulandela okwangoku ukuba ndibone ukusetyenziswa kobuqhetseba kwaye ndikubulele ngokwenza oku.
Ndiyeke enye, ndiza kulandela ikhoyo yangoku ukuze ndibone apho ifike khona kwaye ngukuphi ukukhohlisa okuphelela ukucela imali.